Dredge Tube Factory, mpamatsy - China Dredge Tube mpanamboatra
Mon - Sab amin'ny 7:00 maraina ka hatramin'ny 9:00 maraina
Tavoahangin'ny solika an-dranomasina
Rano mitsingevana an-dranomasina
Tondra-dranon'ny solika an-dranomasina
Tondra-dranon-drano vita amin'ny rano
Salama, avia mba hijery ny vokatray!
Fehin-kodiarana vita amin'ny fehikibo
Mainline Submarine Tube Wit ...
Mainline mitsingevana fantsona
Tube kamiao tanky
Rindrina simenitra maina
Atsofohy Dredge Tube
Tube mitsingevana mitsingevana
Hose dredge mitsingevana ZEBUNG Rubber Dredging Hoses dia tanjona namboarina ho amin'ny fepetra takian'ny mpanjifanay manokana. Izahay dia eo amin'ny toerana ahafahana manangana haben'ny hosotra manomboka amin'ny ID 100 mm ka hatramin'ny ID 2200 mm. Ny mpamoron-tsainay dia hisafidy ireo fitaovana mety indrindra amin'ny vokatra marobe azo ampiasaina hanatontosana ny fepetra takiana amin'ny serivisy sy ny fangatahana takian'ny mpanjifanay, izany hoe ny fanoherana, ny fanerena, ny tanjaky ny tanjaka, ny fahaizan'ny miondrika ary ny masontsivana hafa. Amin'ny ankapobeny ny ZE ...
Hose dredge hose ZEBUNG Rubber Dredging Hoses dia tanjona namboarina ho amin'ny fepetra takian'ny mpanjifanay manokana. Izahay dia eo amin'ny toerana ahafahana manangana haben'ny hosotra manomboka amin'ny ID 100 mm ka hatramin'ny ID 2200 mm. Ny mpamoron-tsainay dia hisafidy ireo fitaovana mety indrindra amin'ny vokatra marobe azo ampiasaina hanatontosana ny fepetra takiana amin'ny serivisy sy ny fangatahana takian'ny mpanjifanay, izany hoe ny fanoherana, ny fanerena, ny tanjaky ny tanjaka, ny fahaizan'ny miondrika ary ny masontsivana hafa. Amin'ny ankapobeny ny Z ...
Hose suction slurry hosoka ZEBUNG Rubed Dredging Hoses dia namboarina ho amin'ny fepetra takian'ny mpanjifanay manokana. Izahay dia eo amin'ny toerana ahafahana manangana haben'ny hosotra manomboka amin'ny ID 100 mm ka hatramin'ny ID 2200 mm. Ny mpamoron-tsainay dia hisafidy ireo fitaovana mety indrindra amin'ny vokatra marobe azo ampiasaina hanatontosana ny fepetra takiana amin'ny serivisy sy ny fangatahana takian'ny mpanjifanay, izany hoe ny fanoherana, ny fanerena, ny tanjaky ny tanjaka, ny fahaizan'ny miondrika ary ny masontsivana hafa. Amin'ny ankapobeny ny ZEB ...
Teknolojia fingotra Hebei Zebung co., Ltd.
Ho an'ny fangatahana momba ny vokatray, azafady mba apetraho aminay ny mailakao ary mifandraisa anay ao anatin'ny 24 ora.